Riyada oo xaqiiqada la kulantay
“Waxaan dareemayaa in aan tikidh u iibsaday filim dhamaaday.”
Waa waqti galab ah oo lix ragg Soomaali ah ay wada fadhiyaan xarunta dhalinyarada Malmö, Sweden. Waxay si xiiso leh uga sheekeysanayaan waayo aragnimada ay kala kulmeen nolosha Yurub markii ay soo galeen iyo waxyaabihii ay ka filayeen.
Geeraar – Abwaan Sahal Osman (Sahal Qardhood)
Usbuucan waxay bahda [Soo Bandhigida Xaqiiqada Tahriibka] idiin soo bandhigaysaa qayb ka mid ah geeraar uu tiriyay Abwaan Sahal Cismaan. Abwaanku wuxuu ka tiriyay geeraarkan hoose ku qoran waayo-aragnimadii uu ka dhaxlay tahriibka, sanadkii 2008. Abwaan Sahal hadda ku nool yahay dalka Sweden gaar ahaan magaalada Norrköping.
Sheekada Xaragele: Baroortii cidlada ahayd iyo dhimashadii badda
Xargeele wuxuu moodayay in safarka Yurub uu noqon doono mid gaaban oo fudud laakiin si xun ayaa loo marin habaabiyay. “Ganacsadayaashi waa kuwa bini-aadamnimo iyo naxariis midna kuma jiro. Ma tirin karo inta jeer ee la i garaacay. Waxaa la igu xidhay baabuur intii ay wadada maraysay si xunna u dhaawacmay. Taasi waa sida ay ahayd. ” La soco sheekadiisa!
Sheekada Saida: Hooyooyinka iyo caruurta naxariis umaa hayan
"Tahriibiyeyaashu waxay u kadhigeen inaysan ahayn meel fog. Laakiin maxaa u dhexeeya? bad, dhibaatooyin, iyo dhaawac. ” Saida waxaa soo gaadhay safar aad u xun, intaas badana, waxay ku qasbanaatay inay lacag deynsato si ay uga badbaadiso inaadeerkeeda gacan tahriibiyaasha. La soco sheekadeeda!
Sheekada Xasan: Waxaa ii cadaadiyey saaxiibbaday
"Way i doodi jireen waxayna i waydiiyeen bal inaan ka baqayo inaan baxo." Xasan saaxiibbada ayuu ka dhaadhiciyay inay safarka halista ah ku qaadaan Libya. Waxa uu soo maray silica ugu naxdinta badnaa si yarna wuu uga badbaaday. Ha rumeynin waxa asxaabtaadu dhahaan, hel macluumaadka saxda ah!
Sheekada Liibaan: Dhibatooyinka xad dhaafka ah
“Meydadku waxay ku dul sabayn jireen biyaha shimbiraha ayaa ka soo duulaya dhul gariirka oo bilaabay inay cunaan. Markay dooni kalluumaysi noo heleen, waxay u digeen Ilaalada Xeebaha Liibiya, kuwaas oo u yimid badbaadinta. Laakiin tan ugu naxdinta badan ayaa ahayd ka hor inta aysan na badbaadin, ay billaabeen toogashada dadka ku dhibaateysan biyaha.